Tilmaamaha waji-xidhka cusub ee CDC: Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Tilmaamaha waji-xidhka cusub ee CDC: Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Maaskarada N95 iyo KN95 aad bay ugu fiican yihiin shaandhaynta walxaha laakiin wali waa fudud yihiin in la xidho. Waxaa loogu talagalay goobaha xirfadlayaasha ah sida daryeelka caafimaadka ama shaqooyinka dhismaha. Maaskarada ayaa sameeya shaabad wax ku ool ah oo leh wajiga qofka waxaana la sheegay in ay sifeeyaan ugu yaraan 95% walxaha yaryar.
Maraykanka Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay soo saarto casriyeyn ku saabsan habraaceeda ku saabsan isticmaalka habboon ee waji-xidhka iyada oo uu jiro aafada caalamiga ah ee COVID-19.
Dadka Mareykanka ah waxaa lagu boorrin doonaa inay xirtaan maaskaro N95 iyo KN95 ka-shaandhayn ka sii wanaagsan (oo ka qaalisan) si loo joojiyo fiditaanka coronavirus.
Haddii dadku "u dulqaadan karaan xirashada maaskaro KN95 ama N95 maalintii oo dhan," waa inay sidaas sameeyaan, CDC waxay leedahay.
Waa maxay waji-xidhka N95 iyo KN95?
Farqiga kaliya ee u dhexeeya waji-xidhka N95 iyo KN95 wuxuu ka yimid heerar kala duwan oo ay dejiyeen mas'uuliyiinta Mareykanka iyo Shiinaha. Shiinuhu wuxuu u baahan yahay tijaabinta waji-ku-qabsiga waji-xidhka ee KN95, oo ka duwan Maraykanka, halkaas oo ururada sida isbitaallada ay ku leeyihiin xeerar u gaar ah aaggan. Heerarka Maraykanku wuxuu sidoo kale u baahan yahay waji-xidhka N95 inay ka yara "neefsadaan" marka loo eego waji-xidhka KN95.
2. Waa maxay CDC Talooyin ku saabsan waji-xidhka hadda?
Nooca hadda ee tilmaamaha CDC, ee la cusbooneysiiyay bishii Oktoobar, wuxuu ku talinayaa in la isticmaalo maaskaro maro raaxa leh oo leh laba lakab oo dhar ah oo loogu talagalay dadka intooda badan goobaha badankood. Waxay si gaar ah uga baahan tahay dadweynaha guud inaysan xidhin qalabka neefsashada ee N95 ee lagu calaamadiyay "qalliin" - taasoo la macno ah in loogu talagalay inay ilaaliyaan xirashada iyo dadka ku xeeran labadaba.
Sababta ayaa ah in isbitaalada Mareykanka aan loo ogolayn inay isticmaalaan ilaalinta KN95 gabi ahaanba, CDC waxay doonaysaa in shaqaalaha daryeelka caafimaadku ay mudnaan gaar ah u yeeshaan kaydka xaddidan. Dhaleeceyntu waxay yiraahdeen talo soo jeedinta, oo soo bilaabatay waqtiyada qalabka ilaalinta shaqsiyeed (PPE) uu gabaabsi ku ahaa caalamka, waa mid duugoobay.
3. Isbeddelku ma ku saabsan yahay Omicron?
Marka la soo koobo, haa, laakiin taasi maaha sheekada oo dhan. Kala duwanaanshaha Omicron wuxuu cadeeyay inuu yahay mid la kala qaado oo aad u awood badan inuu garaaco difaaca uu tallaalku keenay marka loo eego noocyadii hore ee fayraska SARS-CoV-2. Laakin wadamada qaar Europe sida Jarmalka waji-xidho FFP2 ah - kaas oo ah EU Heer bixinta ilaalinta heerka N95 - horraantii Janaayo 2021. Taasi waxay ahayd ka dib markii dhibaatooyinka helitaanka PPE ee caalamiga ah la xaliyay iyo muddo dheer ka hor inta uusan Omicron soo bixin.
4. Waxay u egtahay in dadka Maraykanku ay wajahayaan kharashyo dheeraad ah
Hagaag, qiimayaasha Maraykanka ayaa kor u kacay ka dib warbixinada warbaahintu ee ku saabsan soo socda CDC update hanuuninta. Tusaale ahaan, xidhmo 40 KN95 waji-xidho ah oo ah astaanta Hotodeal ayaa ku booday $79.99 Amazon, laga soo bilaabo $16.99 dabayaaqadii Noofembar, marka loo eego xogtii u dambaysay.